आरएसएसले बनाएका मुख्यमन्त्री - Naya Patrika
आरएसएसले बनाएका मुख्यमन्त्री
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले उत्तर प्रदेशमा विशाल बहुमत हासिल गरेपछि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीमा योगी आदित्यनाथलाई मनोनीत गरेको छ । यसबाट भाजपाको राजनीतिमा युजरनेम ‘विकास’ र पासवर्ड ‘हिन्दुत्व’ हो भन्ने प्रस्ट भएको छ । भाजपाको राजनीतिमा यो कुनै नौलो कुरा होइन । भाजपा निश्चय पनि विकासको कुरा गर्छ । अलिअलि त्यस्तो गर्छ पनि । तर, यसको पूरै अस्तित्व हिन्दुत्वको मुद्दामा टिकेको छ । जुन हिन्दुत्वमा पार्टीको मूल पहिचान छ, त्यस्तो स्थितिमा योगी आदित्यनाथजस्ता नेताहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ । त्यसका साथसाथै वास्तविकता के पनि हो भने उत्तर प्रदेशमा हाल रहेका कार्यकर्तामा योगी आदित्यनाथ सबैभन्दा लोकप्रिय नेता हुन् । तसर्थ, आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री बन्नुमा उनको आफ्नै लोकप्रियता तथा पार्टीको हिन्दुत्व राजनीतिको अहं भूमिका छ । अब उनका अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विकासको एजेन्डालाई लिएर चल्ने चुनौती छ ।
तीन दिशा, एक लक्ष्य
उत्तर प्रदेशमा भाजपाको जुन सरकार बनिरहेको छ, त्यो तीन दिशातिर जाने देखिएको छ । तर, यी तीनैवटा दिशाको उद्देश्य एउटै छ– २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने । वास्तवमा, युपीका आममानिसले नरेन्द्र मोदीलाई ठूलो अपेक्षासहित भोट हालेका छन् । जो मानिस मुलायम, मायावती तथा अखिलेशको राजनीतिबाट वाक्क भइसकेका छन्, उनीहरूले मोदीको माध्यमबाट विकासको सपना देखेका छन् । ती मानिस अवसर चाहन्छन् र मोदीले उत्तर प्रदेशका आमजनतासँग कैयौँ बाचा पनि गरेका छन् । नरेन्द्र मोदीले उत्तर प्रदेशका आमजनतालाई नयाँ राजनीतिको भरोसा दिलाएका छन् । मोदी तुष्टीकरणको सट्टा सबैलाई सँगसँगै लगेर सबैको विकासको कुरा पनि गरिरहेका छन् । तर, आदित्यनाथको छवि त स्वच्छ छैन । न उनीसँग कुनै प्रशासनिक अनुभव नै छ, न विकासको काममा उनलाई जोडेर हेरिएको छ । उनको छवि अल्पसंख्यकविरोधी रहँदै आएको छ । उनी यस्ता नेता हुन्, जो प्रेमयुद्धको कुरा गर्छन् । आदित्यनाथ मुस्लिम समाजको आलोचना गर्नमा पनि अग्रणी छन् । उनले मानिसलाई तर्साउने, धम्काउने खालका अनेक टिप्पणी दिएका छन् ।
—बिजेपीले उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई बनाएबाट बिजेपीको राजनीतिमा युजरनेम ‘विकास’ हो भने पासवर्ड ‘हिन्दुत्व’ हो भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
—आदित्यनाथको छवि स्वच्छ छैन । उनीसँग न कुनै प्रशासनिक अनुभव नै छ, न विकासको काममा उनलाई जोडेर हेरिएको छ । उनको छवि अल्पसंख्यक विरोधी रहँदै आएको छ ।
मुस्लिम समाजको डर
उत्तर प्रदेशको कुल जनसंख्यामा १८ देखि २० प्रतिशत मुस्लिम छन् । यति ठूलो समुदायको उपेक्षा गरेर कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले कसरी प्रदेशलाई अगाडि बढाउन सक्छ ? उनीहरूको भरोस कसरी जित्न सक्छ ? हिजोसम्म जुन तरिकाले योगी आदित्यनाथ मुस्लिमविरुद्ध बोलिरहेका थिए, त्यस्तो स्थितिमा ‘सबैको साथ सबैका विकास’को एजेन्डालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ? यो शंका त जीवित रहिरहन्छ । मुस्लिम समाजका मानिसमा एक पत्रकारको त्रासको स्थिति त पहिलेदेखि नै रहेको छ । अब त्यो त्रास झन् बढ्ने निश्चित छ । इन्डिया टुडे टेलिभिजनको ‘एक्जिट पोल’ मा भाजपालाई भोट दिने मुस्लिमको संख्या केबल दुई प्रतिशत थियो । यति न्यून संख्या हुनुको भित्री कारण त्रास नै थियो । भाजपा अल्पसंख्यक तप्कालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर अघि बढ्न चाहन्छ भने वा त्यस्तो सन्देश दिन चाह्यो भने यो असाध्यै गलत सन्देश हुनेछ । भाजपाले लामो रस्साकस्सीपछि आदित्यनाथलाई अगाडि बढाएका कारण मुस्लिम समाजको त्रास वास्तविकतामा बदलिँदै गरेको देखिन थालेको छ । अल्पसंख्यकका साथ तुष्टीकरणको राजनीति भएको छ, तर त्यसका बदलामा आममानिस आदित्यनाथको राजनीतिलाई मन पराइदिनुपर्छ भन्ने हुन सक्दैन ।
के नोक्सान हुन सक्छ ?
यसबाट भाजपालाई निकै ठूलो नोक्सान हुन सक्छ । अल्पसंख्यक मतदाताको त्यो वर्ग, जो कुनै पार्टीको कार्यकर्ता छैन, भाजपाबाट भड्किन सक्छ । युवाको तप्का टाढिन सक्छ, जो विकास, रोजगारी र अवसर चाहन्छ । यस्ता मतदाताका माझमा योगी आदित्यनाथ कुनै पनि कोणबाट ‘फिट’ हुँदैनन् । यस्तोमा योगी आदित्यनाथका अगाडि निकै चुनौती हुनेछ । उनी कुन तरिकाले प्रदेशको सरकार चलाउनेछन्, कुन हिसाबको राजनीति गर्नेछन् भन्नेले निकै अर्थ राख्छ । उनले निकै सम्हालिएर राजनीति गर्नुपर्नेछ । यहाँ यो पनि उल्लेखनीय छ कि भाजपा र नरेन्द्र मोदीले योगी आदित्यनाथलाई उत्तर प्रदेशको नेतृत्व सुम्पेर निकै ठूलो जोखिम लिएका छन् । त्यसो त आदित्यनाथलाई पनि मौका मिल्नुपर्छ भन्न सकिन्छ । तर, अब उनले निकै सवधानी अपनाउनु पर्नेछ । हिन्दुत्वको राजनीतिबाट नरेन्द्र मोदीले पनि गुजरातबाट आफ्नो पहिचान बनाएका थिए । तर, आफ्नो छविलाई निरन्तर बदलिरहन उनले लगातार मिहिनेत गरिरहेका छन् । अब आदित्यनाथले पनि उत्तिकै मिहिनेत गर्न आवश्यक छ ।
संघको दबाबको परिणाम
योगी आदित्यनाथलाई उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जति भूमिका छ, त्योभन्दा बढी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को छ । पार्टीलाई ३२५ सिटको यति विशाल बहुमत प्राप्त भएका वेला पनि हिन्दुत्वको राजनीति नगर्ने हो भने कहिले गर्ने त भन्ने आरएसएसलाई लागिरहेको छ । यसो किन पनि भने, गुजरातपछि उत्तर प्रदेशलाई आरएसएसले कैयौँ वर्षदेखि निकै आशाका साथ हेरिरहेको छ, वास्तवमा सन् १९०० को दशकदेखि नै । राम मन्दिर आन्दोलनका दिनदेखि नै आरएसएसले उत्तर प्रदेशलाई प्रयोगशाला बनाउने कोसिस गर्दै आएको छ । यसका नेतालाई त्यसवेलादेखि नै आशा थियो कि एक दिन बहुमत प्राप्त हुनेछ । त्यसपछि राम मन्दिर बनाइनेछ र हिन्दुत्वको झन्डा लहराइनेछ । मतदानको सुरुवातमै जब भाजपाले गति लिन थाल्यो, त्यसका कार्यकर्ता खुसी हुँदै अबिरजात्रा गर्न थालिहाले । संघ तथा भाजपाले यति ठूलो अपेक्षा झारखण्ड, महाराष्ट्र वा हरियाणामा कहिल्यै गरेको छैन । उनीहरूको हिन्दुत्वको एजेन्डा सधैँ नै उत्तर प्रदेशलाई ध्यानमा राखेर नै अगाडि बढ्दै आयो ।
यही अपेक्षाका कारण संघले नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको जोडीमाथि दबाब दिएर आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो । अब संघ र भाजपाको कोसिस हिन्दुत्वको साथसाथ विकासको राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाउने हुनेछ । केबल हिन्दुत्वको नाराले मात्र चिज अगाडि बढ्न सक्नेछैन । तैपनि, भाजपालाई निकै मुस्किल भने हुनेछैन । किनकि, विपक्षको स्थिति निकै कमजोर छ । बाँकी तमाम दलको विश्वसनीयता कम भएको छ । मानिसहरू कांग्रेस, बसपा र सपाको तुष्टीकरणको राजनीतिबाट वाक्क भइसकेका छन् । यी पार्टीले आफ्नो राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् भने तुलनात्मक रूपमा भाजपालाई आगामी कैयौँ वर्षसम्म फाइदा हुनेछ ।
यो अनुकूलता कायम रहिरहोस् भनेर आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुका साथसाथै दुई–दुईजनालाई उपमुख्यमन्त्री बनाइएको छ । एकजना केशवप्रसाद मौर्य हुन् । मौर्यमार्फत् भाजपाले पिछडिएको वर्गलाई निकटमा राख्ने कोसिस गरेको छ । अर्कोतर्फ दिनेश शर्मा हुन्, जसमार्फत् परम्परागत ब्राह्मण मतदातालाई खुसी राख्ने काम गरिएको छ । तर, यो पूरै प्रयासबाट स्पष्ट हुन्छ कि अन्ततः जित हिन्दुत्वको राजनीतिको भएको छ । सशक्त विपक्षको अभावमा यो राजनीति केही दिनसम्म चल्नेछ नै । भाजपा युवा मतदातालाई पनि आफूसँग जोडिराख्न सफल हुनेछ । तर, विकास भएन भने, मानिसलाई काम मिलेन भने, युवालाई रोजगारी मिलेन भने उनीहरू अर्को पार्टी खोज्न थाल्नेछन् ।
राजदीप सरदेसाई भारतका वरिष्ठ टेलिभिजन पत्रकार हुन् ।
तपाईंलाई सरदेसाईको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।
पाठक टिप्पणी : शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन खारेज गर सरकार !
तातोपानी नाका खोल्न चीनले सहयोग गरेन : मन्त्री बलायर
ट्रम्प र किम स्कुले केटाकेटी जस्ता : रुसी विदेशमन्त्री